Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary 1.9.7Mc Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.9.7Mc လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အံ့ဖွယ်၏စကားမှကြိုဆိုပါ၏! ဒီစိတ်ကူး crossword ဂိမ်းမှာတော့သင်7အံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်လည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြို့ကြီးများ၏ဝှက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာတစ်ချိန်တည်းမှာသင့်ရဲ့ဝေါဟာရနှင့်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
wow သင်တစ်ဦးထူးခြားတဲ့သဲလွန်စအဖြစ်အနည်းငယ်အက္ခရာများနှင့်အတူစတင်လာလိမ့်မည်, သင်ရေးသားဖန်တီးစကားလုံးအသစ်ခြစ်ရာကနေနဲ့နောက်ဆုံး crossword ဖြေရှင်းချက်ရရှိရန်သူတို့အားလုံးကိုချိတ်ဆက်ဖို့သင့်ဦးနှောက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤဝေါဟာရစကားလုံးများကိုဂိမ်းကျွမ်းကျင်ကြမည်နည်း တခါတရံသင်သည်သင်၏ဦးခေါင်း၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ချိတ်ဆက်ဖို့ပိုပြီးစကားများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဖြစ်ဖြေရှင်းချက်ခန့်မှန်းရပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် wow ကမ္ဘာကြီးဂိမ်း, သင်ယူခြင်းပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်ပြဿနာကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေး, သင့်ရှာဖွေ, အရေးအသားတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြီးပြည့်စုံဖျော်ဖြေရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
စကားလုံး, အံ့သြစရာများကအံ့သြစရာများနှင့်ပဟေဠိများကပဟေဠိသောစကားအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသော crossword ထစခွေငျးငှါတိုင်းစိန်ခေါ်မှုဖြေရှင်းနေချိန်မှာသင်တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသွားလာကြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ရရှိရန်အသစ်တစ်ခုနိုင်ငံသို့ခရီးသွားလာအက္ခရာများချိတ်ဆက်ပါ! မည်သည့်စကားလုံးအသစ်သင်ယူခြင်းနှင့်သင့်ဝေါဟာရတိုးတက်အောင်နေစဉ်ကမ္ဘာကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ရှိပါသလား?
သငျသညျအဘယျသို့နညျးဗြူဟာကိုသုံးပါလိမ့်မည်နည်း တစ်ကြိမ်မှာစကားလုံးရှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်မှန်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်သလော အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းထဲကဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လာမယ့်မြို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း ဒီအံ့သြဖွယ် crossword ဂိမ်းထဲမှာသင်ကသူတို့အားလုံးကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမည်!
သင်အမှန်တကယ်မည်သို့များစွာသောစကားချိတ်ဆက်ဖို့သိရသလဲ သင့်ရဲ့အက္ခရာကိုသင် ... စဉ်းစားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ထက်ပိုမိုကန့်သတ်စေခြင်းငှါ, ဤရွေ့ကားပဟေဠိစိန်ခေါ်မှုများမှာနှင့်သင့်ဝေါဟာရသငျသညျ options အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်, သင် jigsaw ဖြေရှင်းဖို့ကောင်းစွာလုံလောက်စွာရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းမည်။
အရေအတွက်ကဂိမ်းနဲ့ဆင်တူပေမယ့်စာလုံးအစားကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူ, ဒီ crossword ဂိမ်းကိုသင်တိုင်းစကားဝှကျကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပျလိုအပျသောကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်လာမည့်အဆင့်ဆင့်ကိုသွားဖို့ဝေါဟာရကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ wow သင်သည်အလွန်အံ့သြစေရန်တာတွေရပ်စဲဘယ်တော့မှမယ့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရှာပုံတော် join နှင့်အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကသင်၏ခရီးစဉ်ကိုပျော်မွေ့! သင့်ရဲ့အသိပညာသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါနှင့်သင်အများကြီးချီတက်ကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအထိန်းအမှတ်အဆောက်အအုံထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအက္ခရာရှိပါတယ်။ သငျသညျအသစ်များကိုဝေါဟာရသင်ယူပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လည်းမြေကြီးတစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်လောက်အံ့သြစရာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြသည်! သင်တစ်ဦးက hidden ဝါကျဖန်တီးနိုင်တော်မူမည်လော ဒါဟာရယ်စရာ crossword ဂိမ်း ပို. ပင်စိန်ခေါ်မှုဂန္လက်ဝါးကပ်တိုင်ဟင်းချိုဂိမ်းထက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသွားကြသော!
သငျသညျစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ပြည့်စုံအံ့ဘွယ်သောအရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်အံ့ဖွယ်၏စကားများ (wow) သင့်ဝေါဟာရစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးအံ့သြစရာနှင့်သင်၏ခရီးကိုစတင်များနှင့်ထိပ်ကိုရောက်ရှိရန်သင့်လမ်းသို့တက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအံ့သြစရာများနှင့်အဆင့်အထိ, ဂိမ်းရဲ့ကြွယ်ဝသောဒေတာဘေ့စမှကျေးဇူးတင်စကားတဖြည်းဖြည်းခက်ရလိမ့်မည်နှင့်ထူးခြားသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဝှက်ထားသောစကားများတွေ့ပါကသင်၏လက်ညှိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲအက္ခရာများချိတ်ဆက်ပါ!
အံ့ဘွယ်သောစကားများ (wow) Wordz ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ထိပ်တန်း rated စကားလုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစွန့်စားမှုစတင်ကြပါစို့
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary အား အခ်က္ျပပါ
catappult စတိုး 31.05k 27.14M
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.9.7Mc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://fugo.com.tr/privacypolicy-wordsofwonders.html
Release date: 2019-08-19 15:19:46
လက်မှတ် SHA1: 95:BC:CC:9C:26:E0:C7:67:F6:7A:27:A4:BA:65:84:89:38:4B:33:70
အဖွဲ့အစည်း (O): Fugo Games
Words of Wonders: Crossword to Connect Vocabulary APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ